‘केपी ओलीसँग एकता गरेर ठूलो ज्ञान प्राप्त भयो, अब राजनीतिबाट बिदा लिएर संस्मरण लेख्न मन छ’ – Classic Khabar
‘केपी ओलीसँग एकता गरेर ठूलो ज्ञान प्राप्त भयो, अब राजनीतिबाट बिदा लिएर संस्मरण लेख्न मन छ’
August 29, 2021 76
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब आफु राजनीतिवाट विदा लिने मनस्थितीमा पुगेको बताएका छन् । उनले युवाहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वमा आउन आह्वान समेत गरेका छन् । युवाहरुलाई राजनीतिको जिम्मेवारी दिएर आफुले विदा लिने अनि संस्मरण लेख्ने उनको भनाई छ ।
योङ कम्युनिष्ट लिग ९वाईसीएल०को राष्ट्रिय भेलालाई काठमाडौंबाट सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने अवसर युवालाई भएको र त्यसका लागि तयारी लाग्न भनेका छन् ।
‘मलाई छिटोभन्दा छिटो राजनीतिबाट बिदा लिएर संस्मरण लेख्न मन छ । तर, युवाहरू तयार नहुँदासम्म मैले छुट पाउने देखेको छैन । छिटै तपाईंहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ । हामी छिट्टै युवालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउँछौँ । त्यो भनेको भोलि नै चाहिँ होइन,’ प्रचण्डले भने ।
वाईसीएलले भचुर्अल माध्यमको प्रयोग गरेर राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको हो । प्रविधिको प्रयोग गरेर सम्मेलन आयोजना गरेको भन्दै प्रचण्डले वाईसीएलको प्रशंसा गरेका थिए ।
पार्टी एकता गर्ने केपी ओलीको कामलाई प्रचण्डले ओलीको ठ गी ध न्दा भनेका छन् । ‘पार्टी एकता गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न केपी ओलीले ठ गी ध न्दा गरेका रहेछन् । तर, साथीहरूले केपी ओलीसँग एकता गरेर के पाइस् भन्ने गरेका छन् । केपी ओलीसँग एकता गरेर ठूलो ज्ञान प्राप्त भएको छ,’ प्रचण्डले भने ।
Prevकमेडी च्याम्पियनमा सधैँ हँसाउने विक्की अग्रवालले किन आउट नहुँदै रुँदै स्टेज छोडे ?
Nextओलीलाई अर्को झट्का ! एमालेले सिफारिस गरेका माधव नेपाल सहित १४ जनालाई कारवाही नगर्ने सभामुखको जवाफ
ओलीलाई भेटेपछि भिम रावल फेरीए, उत्साही हुँदै दिए यस्तो प्रतिकृया
कन्नड अभिनेत्री सौजन्याले गरिन् संसार त्यागिन, अपार्टमेन्टमा भेटियो यस्तो नोट